Tsarovy aho? Cookies amin'ny tranokala
Alakamisy, Septambra 16, 2010 Talata, Aprily 1, 2014 Nick carter
Mahatsiravina aho amin'ny anarana. Maniry aho ny hametraka ny cookie-nao ao an-tsaiko ka isaky ny mahita anao imasom-bahoaka aho dia mahatsiaro izany. Heveriko fa izany no fomba iray izay “manan-tsaina” kokoa noho ny olombelona ny solosaina. Saingy, noho io fahalemeko manjelanjelatra io dia gaga be aho rehefa mahatadidy ahy mora foana ny hafa aorian'ny fihaonana sendra fotoana iray monja. Fahaizana izany. Fantatrao ve ny tsy manaitra ahy: rehefa sandoka izany ny olona. Fahita loatra izany any amin'ny fiangonako, izay anaovan'ny tsirairay ny marika famantarana. Mazava ho azy, miaraka amina olona 700 manatrika, be ny fijerena fohy ny tratrako alohan'ny hifandraisany indray amin'ny masony ary hiteny hoe: “Salama, Nick!” miaraka amin'ny tsiky voaloko. Tsy saro-kenatra aho.
Ankehitriny, miaraka amin'ny fetra farany voalaza ao an-tsain'ny olombelona, ​​azo ekena tanteraka fa tsy mahatadidy ny anarako ireo mpiangona namako. Ka inona no tsy azo ekena? Rehefa tsy afaka ny solosaina. Mora dia lavitra loatra ny fampiasana ny haitao noho ny fitadidiana ny olona mba tsy hahombiazan'ny tranonkala. Na izany aza, mbola maro no manao. Ary, ny ratsy indrindra, dia ny tena izy Bebe kokoa mahasosotra rehefa tsy mahatadidy ahy ny tranokala noho ny olona tsy mahatadidy ahy.
Voalohany, raiso ny mpampiantrano ankafizin'ny olona rehetra (na, dokambarotra fampiantranoana farafaharatsiny) GoDaddy.
Mpanjifa GoDaddy aho. Efa an-taonany maro aho. Ary, nahafinaritra azy ireo ny mahatadidy ny anarako rehefa mitsidika aho. Isaky ny manomboka fivoriana vaovao ao amin'ny GoDaddy.com aho dia arahabaina amin'ny “Tongasoa, Nicholas.” Nilaza tamiko mihitsy aza izy ireo fa manana domains vitsivitsy lany daty aho, ary manolotra fifampiraharahana vitsivitsy izay (heveriko) voafantina mifototra amin'ny fitondrako mividy.
Asa tsara… saika. Marina izany, tadidin'izy ireo ny anarako. Saingy, tsy mitovy ny fomba itondran'izy ireo ahy vokatr'izany. Tena nanoratra an'i GoDaddy tamin'ity fitarainana ity aho: rehefa miseho aho dia ataonareo hoatran'ny tsy mpanjifa aho. Ny fitetezana dia atiny mialoha ny varotra rehetra. Raha te-hiditra amin'ny fonenako aho, ireo tranokala nampiantrano ahy, ny kaontiko sns, fantaro izay tokony hataoko: kitiho ny rohy "tsy ianao" ary midira vaovao. Izay ihany, tsy mampiseho endrika fidirana vaovao amin'ny pejy iray ihany. Tsia, rohy mivantana mankany amin'ny pejy vaovao tsy maintsy entina izy io.
Ankehitriny, azoko atao ny mankasitraka ny filàna fiarovana ny vaovao izay mila fidirana. Ary, tokoa, faly aho fa manao izany izy ireo. Na izany aza, LinkedIn nahavita nahita fomba nahafehy anao hahatsiarovana anao–tena mahatsiaro anao – nefa mbola miaro izay mila arovana aorian'ny fidirana.
Rehefa tonga ao amin'ny LinkedIn.com aho dia afaka mahita ny zavatra antenaiko ho hitako fa mpampiasa voasoratra anarana aho ary mahatadidy ahy izy ireo. Afaka mivezivezy tsy tapaka aho. Tsy fahatsiarovana faux io. Na izany aza, raha manandrana mandefa, manavao, na manova angona misy aho, manelingelina ahy amin'ny fifanakalozan-kevitra haingana, izay mahatadidy ny anarako. Ka sehatra iray haingana fotsiny hamenoana, hiditra hiditra, ary manohy mandeha tsy misy tohiny aho.
Niasa mba hihatsara kokoa amin'ny fahatsiarovako ireo mpanjifako ihany koa. Ao amin'ny my toerana, efa ela izahay no nanolotra ny hahatsiaro ny mpanjifa. Zahao ilay boaty dia ho tadidinay ny fahazoan-dàlana hidiranao ho anao. Saingy, vao tsy ela akory izay dia nianatra fika vaovao avy amin'ny namako aho Mack Earnhardt mety te hampiasa ianao. Raha tapitra ny fotoam-pivavahan'ny olona iray, na raha mitsidika rohy izay mitaky fidirana aloha izy ireo, alohan'ny handroahana azy ireo hiditra amin'ny efijery fidirana, mitahiry fiovaovan'ny session miaraka amin'ny toerana tadiaviny. Avy eo, aorian'ny fidirana an-tserasera mahomby, dia navily lalana ho any amin'izay tian'izy ireo haleha izy ireo. (Misaotra, Mack)
Ny fomba tsara indrindra hahafantarana ny fametrahana ny tranokalanao hahatsiarovanao ireo mpitsidika dia ny fitsidihanao mpitsidika matetika. Ampiasao ny tranokala toy ny ataon'ny mpanjifanao, jereo izay mandeha na tsia. Tsy azoko an-tsaina hoe mampiasa ny tranonkalany manokana ny mpiasan'ny GoDaddy hitantanana ny sehatra misy azy ireo - angamba ny antony tsy nahamarika ny fizotr'izy ireo mahasosotra. LinkedIn, etsy ankilany, mety mavitrika tokoa amin'ny fitaovan'izy ireo manokana. Mandeha amin'ny kiraron'ny mpanjifanao ve ianao? Tadidio ny atao hoe mahatsapa hadino.
Zavatra 10 Nanjavona ny fahafahanao misafidy izay manohy manimba ny orinasanao
Sep 16, 2010 ao amin'ny 12: PM PM
Manaiky tanteraka, Nick! Afa-tsy ny fitiavanao an'i GoDaddy, izay manana ny iray amin'ireo Fepetran'ny serivisy malalaka indrindra ao amin'ny indostria.
Sep 16, 2010 ao amin'ny 4: PM PM
Raha mieritreritra ianao fa malalaka ny TOS-ny, vakio ny ahy. Geesh, mahagaga raha misy olona mividy amiko. (oops, efa navoakan'io ve ilay izy)
Sep 16, 2010 ao amin'ny 6: PM PM
Ny olana amin'izy ireo dia afaka mandray ny sehatra misy anao izy ireo raha tsy misy taratasy ara-dalàna. Vakio ny nodaddy.com raha te hahita ny sasany amin'ireo tantara mampihoron-koditra amin'ny orinasa very anarana tsy misy antony.